Sida loo dhaqaaqo ama loo nuqul faylasha ama fayllada ku jira Linux? | Laga soo bilaabo Linux
Sida loo dhaqaaqo ama loo nuqul faylasha ama fayllada ku jira Linux?
In badan oo naga mid ah, haddii aysan ahayn qaybta ugu weyne waxaan u baranay inaanu isticmaalno qaab muuqaal ah ama desktop desktop si loo hadlo. Hawlaha guuritaanka, tafatirka, dib ugu magacaw waxyaalaha kale feylasha ama fayl badiyaa waxaa lagu sameeyaa hab fudud oo dhowr guji oo keliya ah.
Laakiin Maxaa dhacaya marka ay tahay inaad u isticmaasho dhaqdhaqaaqyadan server maaddaama badankood badiyaa laga maamulo oo keliya konsole amarka, tan waxaa badanaa lagu hayaa server-yo gaar ah, in kastoo waligood dhib malahan in la ogaado sida tan loo sameeyo waayo waligaa ma ogaan kartid goor ay mashquul noqon karto.
Aniga ayey igu dhacday in mararka qaar aan lumiyay jawigeyga garaafka ah waana inaan u adeegsadaa qunsuliyada si aan u soo ceshado, laakiin taasi waa qodob kale.
Maalinta maanta waxaan u imid inaan idinla wadaago amarro fudud oo na caawin doona si ay u qabtaan howlaha koobiyeynta ama dhaqaajinta feylasha.
1 Sidee loo dhaqaajiyaa faylasha ama faylalka ku jira Linux?
2 Sida loo guuriyo faylasha Linux?
Sidee loo dhaqaajiyaa faylasha ama faylalka ku jira Linux?
Waxa ugu horeeya waxay noqon doonaan inaad yeelato terminal taas oo noqon doonta aaladda naga caawin doonta waxaas oo dhan, waxa labaad waa in la abuuro galka qaar ka mid ah dukumintiyada qoraalka gudahooda tan si aan loo dhaawicin ama loo lumin macluumaadka.
Waxa ugu caansan waa in la raro faylka galka tan waxaan u isticmaali doonnaa amarka mv:
Halkan waxa aan sameyneyno ayaa u wareejinaya file.txt galka imtixaanka ee ku jira galka dukumiintiyadayada. Tan awgeed waxaan ku xisaabtameynaa inaan hadda ku jirno diiwaanka halka file.txt uu ku yaal
Marka aan rabno inaan dhaqaaqno in kabadan hal feyl markiiba, nooca qoraalka wuxuu noqonayaa kuwan soo socda:
Hadda wax aad u faa'iido badan waa in la isticmaalo a * marka feylasha ay isku magac ku yaalliin magaca, tusaale ahaan:
Talooyin: In ka badan 400 oo amarro ah oo loogu talagalay GNU / Linux oo ay tahay inaad ogaato 😀
Marka, sida aan arki karno, waxay leeyihiin isla "AMD" saldhig si ay ugu dhaqaajiyaan dhammaan faylashaas isla isla magaca magac-bixinta, waxaan sameynaa waxyaabaha soo socda:
Isla sidaas ayaa loo adeegsadaa dhammaan faylashaas oo isku nooc ah, tusaale ahaan, .doc, .xls, .deb, .rpm iwm. Si aan u dhaqaajino ayaynu kaliya codsaneynaa
Ilaa iyo hadda way yara cadahay sida ay u shaqeyso iyo sida aan howsha ugu fududeyn karno siyaabo kala duwan, laakiin maxaa dhacaya markaan rabno inaan dhaqaajinno wax kasta oo leh tusaal, feylasha iyo subold-yada.
Tan waxaan u adeegsaneynaa *, tusaale ahaan, waxaan rabaa in aan u wareejiyo wax kasta oo aan ku soo rogay wordpress illaa laba hage ee hore:
Si aad wax yar uga ogaato amarka waxaan u adeegsan karnaa ninkeeda ama aaladda'help parameter ', halkan waxaan ku arki doonnaa dhammaan cabirradeeda.
Sida loo guuriyo faylasha Linux?
Kiiskan waxay u dhowdahay mid lamid ah taa, inaad u guurto faylasha ama faylalka midba midka kale, halkan ku xafid faylasha iyo galka meesha ay ka yimaadeen oo aad ku abuurto nuqul galka la xushay.
Un amar fudud oo nuqul fayl ama fayl ah ka mid ah buugga macluumaadka kale:
Qaab cad oo loo eego:
Amarkan badanaa waxaa loo isticmaalaa wax badan si loo sameeyo keydinta feyl ama fayl la doonayo in wax laga beddelo, maadaama ay abuureyso nuqul guud, laakiin leh magac ka duwan, tusaale wax ku ool ah:
para nuqul faylal badan ama fayl:
Hadda haddii aan dooneyno inaan nuqul ka sameysano wax kasta oo ku jira galka meesha naloo dhigay galka kale:
Hadda haddii aan dooneyno inaan ka nuqul ka sameysano buugga meel ka mid ah una wareejino meel kale
Waa muhiim in hal heer ka hoosayso galka aan nuqul ka dooneyno, maxaa yeelay haddii aan ku dhex jirno waa lagama maarmaan in la caddeeyo wadada buuxda, maadaama haddii kaliya aan amarka ku dhejinayno sidaan u dhigay, kaliya waxay abuureysaa tusaha madhan.
Ugu dambeyntiina, haddii aan rabno inaan ogaano dhammaan xaddidyadeeda waxaan ku tiirsannahay ninkeeda ama caawimaad
Iyadoo aan la sii ambaqaadin, waa amarro aad u aasaasi ah, isticmaalkooda ayaa wax badan kaa caawin kara adiga xitaa waa inaad ka taxaddartaa iyaga maxaa yeelay had iyo jeer waxaa lagula talinayaa inaad isticmaasho foomka soo noqoshada, kaas oo loo adeegsado halbeegga -r.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Sida loo dhaqaaqo ama loo nuqul faylasha ama fayllada ku jira Linux?
Jorge C Rodriguez S. dijo
Haddii aan doonayo inaan nuqulo feylasha oo dhan hal galka illaa mid kale markaa markaas ayey noqonaysaa
cp / * / magaca / galka / halka loo socdo ??
taagan faylka aan ku hayo feylasha aan nuqul ka sameeyo?
Jawaab Jorge C Rodriguez S
Juan Manuel Carrillo Campos dijo
Waxaan rabaa inaan nuqul ka sameeyo tiro cayiman oo rikoodh ah oo ka socda isha-feylka illaa halka loo socdo-faylka, mararka qaarkood waa diiwaan-laga soo bilaabo diiwaanka-illaa kala duwanaan, sideen ku samayn karaa tan?
Jawaab Juan Manuel Carrilllo Campos
Waa maxay isku beddelka Linux iyo sida loo isticmaalo?
Sidee loo rakibaa wadayaasha AMD gpu pro ee Linux Mint?